fandidiana matavy loatra
Ity fampianarana ity dia natao ho an'ny olona liana amin'ny fandidiana matavy loatra, na noho io fitsaboana io dia nomanina ho an'ny tenany na ho an'ny olon-tiana, na koa satria, amin'ny maha-mpitsabo ara-pahasalamana azy, dia te hahalala bebe kokoa. Ity fampianarana ity dia mirakitra ny famantarana, ny fahombiazany, ny teritery sy ny loza mety hitranga, ny fanomanana ary ny teknika amin'ity fandidiana ity.
Hanaraka ny tantaran'i Gaëlle sy Julie ary Paul amin'ny endrika sketsa ianao; hamaly fanontaniana ianao ary hanaraka ny valintenin'ireo manampahaizana amin'ny endrika video.
fandidiana matavy loatra 10 Desambra 2021Tranquillus
HAMAKY Microsoft Power BI Basics ho an'ny vao manomboka
Teo alohaFampiasana fisainana mitsikera: angon-drakitra diso sy fisainana
manarakaProgramming object immersive ao amin'ny Pharo
College, ho ahy ve izany?
Manana mpanaraka bebe kokoa amin'ny Instagram ho azy?
Aretina: azo atao mihena ve ny mpiasa tsy manao tatitra ny fijanonan'ny asany?